fiara sy moto | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: auto sy moto
Hyundai H1 Grand Starex: famaritana, sary
Ny Hyundai H 1 Grand Starex dia minibus an'ny ampahan'ny fiaran'ny fianakaviana. Raha ny kalitao sy ny toetra teknika dia hifaninana amin'ny marika manerantany toa ny Mercedes, Volkswagen, sns.
ZAZ Vida (ZAZ Vida): toetra ara-teknika. Heverin'ny tompony
Auto ZAZ "Vida" dia maodelin'ny fitaterana maivana ho an'ny tena manokana, izay novokarina ho toy ny hatchback sy ny sedan. Ny famokarana marobe dia natomboka tamin'ny 2012. Fiara amidy any Ukraine ...
Zis-110. Fiara Sovietika fiara
Ny fiara raitra sokajy avo indrindra ZIS-110 dia noforonina tamin'ny taona 1945. Ny fiara dia natao hanompoana an'i Kremlin nomenklatura, governemanta ary ireo minisitra. Ny maodely dia rafitra firafitry ny enta-mavesatra mitondra tanjaka mitombo, mahazaka ...
Kayo 140: famerenana, hevitra manokana, sary, fanamboarana
Teknolojia malaza any amin'ny firenena eropeana ny bisikileta pit, fa amin'ny faritanin'i Rosia dia gaga izy ireo. Ny teknikan'ity sokajy ity dia karazana motera motocross mihena. Pit Pit ...
Tractor MTZ 1523: famaritana sy hevitra momba ny tompona
MTZ 1523 dia traktera fambolena misy kodiarana marobe natao hametrahana asa marobe. Ny maodely dia ampiasaina hanomanana ny tany amin'ny famafazana, famafazana, fitsaboana zana-ketsa, manampy amin'ny fijinjana sy ...
Traktor T-4A: fepetra ara-teknika, sary, fanamboarana
Ny traktera dia be mpampiasa amin'ny asa fambolena sy indostrialy, novokarin'ny orinasa maro an'ny Firaisana Sovietika. Any Kazakhstan sy Siberia lavitra, ny fitaovana an'ny zavamaniry Altai dia nampiasaina hiasa. Fiara T-4 ireo, ...
Ahoana no hanombohan'ny fitsapana tena Toyota: torolàlana tsikelikely. Famaritana tena manokana amin'ny famindrana mandeha ho azy "Toyota"
Ny fiara, araka ny fantatrao, dia an'ny fitaovam-pitaterana fa tsy an'ny entana lafo vidy. Ireto misy vidin'ny fandinihana diagnostika sasany ary mampiahiahy anao izany. Amin'ny lafiny maro dia mihatra amin'ny ...
"Mercedes W204": famaritana, famaritana, tsikera
Ny Mercedes W204 dia taranaka fahatelo amin'ireo fiara manana halehibe antonony ao amin'ny kilasy C. Ny teo alohany dia ny W203. Natolotra tamin'ny haino aman-jery ity fiara ity tamin'ny 2007, ny volana janoary, ary efa tamin'ny martsa ...
Inona no dikan'ny marika Skoda? Tantaran'ny sary famantarana
Inona no dikan'ny marika Skoda? Mahaliana ny maro ny fanontaniana. Ny logo an'ny orinasa Czech malaza mamokatra fiara mpandeha dia mitaona ny fikambanana isan-karazany. Ny sasany mahita vorona mamelatra elany manoloana ny tontolon'izao tontolo izao, ny sasany zana-tsipika manidina, ny hafa ...
Fiara miaramila Rosia sy izao tontolo izao. Fitaovana miaramila rosianina
Ny tafika any amin'ny fanjakana dia noforonina mba hiarovana amin'ny fanafihana isan-karazany sy hiambina ny sisin-tany ary miantso ny milina miaramila hanampy azy ireo amin'izany. Mandritra izany fotoana izany dia samy mifandray akaiky ny olona sy ny haitao ...
Tantaran'i AvtoVAZ. Zava-misy mahaliana sy sary mahaliana
Tamin'ny taona 60 tamin'ny taonjato lasa dia marika marika fiara maromaro no novokarina tany USSR. "Cossacks", "Volga" ary "Muscovites" dia hitoetra ao amin'ny fahatsiarovan'ny olom-pirenena ao amin'ny firenentsika ho nostalgia mandritra ireo fotoana lavitra ireo. Fa ao ...
Fametrahana rafitra anti-halatra mekanika. Famerenana ny modely tsara indrindra
Ny rafitra mekanika miady amin'ny halatra dia be mpitady eo amin'ireo mpitondra fiara efa ela. Ny tsena rosiana amin'izao fotoana izao dia manome fitaovana marobe hiadiana amin'ny halatra mekanika avy amin'ireo mpanamboatra isan-karazany. Na izany aza, tsy ny vokatra rehetra ...
Jeep "Rubicon-Wrangler": sary, hevitra momba ny tompona, famaritana
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny orinasa amerikana Willis Motors dia namorona ny CJ SUV. Ny fiara no nampiasaina na teo aloha na tao aoriana. Ny fahaizan'ny fiampitana an-tanety no nahatonga ny fiara nilaina tamin'ny toe-javatra sarotra. ...
Safidy sy ny toetran'ny fiara Chevrolet Cruze Hatchback
Chevrolet Cruze dia fiara novokarin'ny orinasa Amerikanina General Motors nanomboka tamin'ny 2008. Nisolo fiara roa ity fiara ity: ny Chevrolet Cobalt sy ny Chevrolet Lacetti. Tany Russia, nanomboka nanangona izany tao amin'ny orinasa iray izy ireo ...
Ny mpandoka mahatsikaiky SS20. VAZ mpikafatafona
Ho an'ity fanontaniana ity: "Ny fiara ve dia rendrika sa fitaovam-pitaterana?" - misy valiny telo farafaharatsiny. Misy olona hisafidy ny safidy voalohany, ny iray amin'ny faharoa, ary ny sasany - samy indray mandeha. Ary ny marina, toy ny mahazatra, ...
Fa maninona no nandositra ilay motera diesel: antony, vokatr'izany? Diagnostika ny milina diesel
Ny motera mahazatra indrindra amin'izao fotoana izao dia ny gazoala sy lasantsy. Ity farany dia teraka talohan'izay, saingy izao dia milatsaka ny lazany. Ny maotera diesel dia mahomby kokoa sy ara-toekarena. Na izany aza, ka ny moto ...
Manoritra moto iray ao an-trano
Izay fanavaozana ny endrika amam-bika rehetra dia afaka manavao ny endrika asan'ny moto taloha amin'ny fomba izay, raha tsy mijery akaiky ianao dia mety tsy ho fantatrao izany. Anisan'ireo fiovana manaitra ny endrika ireo ny fanaovana hosodoko. Eny, loko vaovao, verinia, ...
78 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,533.